Xayawaanada Nolosha Lagu Cuno
Waxaa aduunka ka jira makhaayado caan ku ah in nolosha lagu cuno xayawaanka. Arintan oo ka soo bilaabatay Bariga Aasiya ayaa usoo gudubtay wadamada Galbeedka. Xayawaanada nolosha lagu cuno waxaa ugu badan kuwa badda ee seafood loo yaqaano.
"Waxaa dood badani ka taagnaan jirtay in xayawaanka iyagoo nool la kariyo sida aargoosatada oo kale, iyadoo sababta sidaa loo samaynayey ay ahayd in iyadoo isku dhan miiska la soo saaro, laakiin hadda waxaa la marayaa in nolosha lagu cuno" Sidaa waxa yiri nin ka mid ah dadka u dooda xuquuqda xayawaanka.
Dadka jecel inay wax nool cunaan ayaa ku doodaya in aanay u dhadhameyn hadii aanu nooleyn. " Waxaan aad u cunaa octopus ama farabadanta iimana dhadhanto hadii aanay nooleyn oo i soo eegeyn," waxaa sidaa yiri nin reer Kuuriya ah oo qabatimay inuu nolosha ku cuno xayawaanka badda.
Dalka Hindiya magaalada Hyderabad, waxaa isugu yimi kumanaan qof oo qaba xanuunka asmada ama neefta, dadkaas waxay nolosha ku cuneen kaluunka loo yaqaano Sardiinka oo ay rumeysan yihiin in hadii nolosha lagu cuno lagaga dawoobo xanuunka neefta.
Waxay wax badan dhakhaatiirtu ka digaan cunista hilibka ceedhiin. Dalka Taiwan oo caan ku ah inay ceedhiinka ku cunaan kaluunka ayaa waxaa ugu badan xanuunada dadkooda soo rida ee Diphyllobothriasis oo ah xanuun ku dhaca beerka iyo maqaarka, waxaana keena hilibka ceedhiin.
Louis Cole oo Ingiriis ah ayaa soo geliyey youtube isagoo cunaya kaluun nool taasina waxay keentay in dacwad lagu soo oogo, isla markaana dad badan ayaa ugu hanjabay inay dili doonaan iyagoo sababtana ku sheegaya inuu xayawaan nolosha ku cunay. Laakiin Louis wuxuu ku doodayaa inay jiraan makhaayado badan oo lagu cuno xayawaanka nolosha magaalada London, ha dacweeyeen makhaayadahaas ayuu yiri Louis oo la yaabanaa waxa loo haysto.